Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » WTM London mepere emepe: Ntọhapụ ka ọ bụ egwu?
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Iwughachi • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Ahịa Njem Ụwa mepere emepe; World of Tourism na-ezukọ na London - na ọ bụ nzukọ obi ụtọ ruo ugbu a.
Dị ka atụmatụ ndị World Travel Market (WTM) wepụtara si kwuo, ndị na-eme ihe ngosi sitere na mba 100 kwadoro, ndị na-azụ ahịa na-abịa site na mba na mpaghara 141 na-aga n'ihu na-egosi ahia ahia na London (November 1-3).
Izu abụọ gara aga, World Tourism Network rịọrọ Reed, onye nhazi WTM London ka o nye iwu mkpuchi ihu.
Ahịa njem mba ụwa kwere nkwa nchekwa maka ndị niile sonyere bụ ihe kacha mkpa.
Izu abụọ gara aga, WTN kwuru eTurboNews ma biputere na webụsaịtị ya: "Anyị na-akwadosi ike ka ị na-eyi ihe nkpuchi ihu mgbe gị na ndị ị na-agaghị ejikọkarị ọnụ."
Network Tourism Network nọ na-agba WTM ume izu ole na ole gara aga ka ọ gaa n'ihu ma nye iwu iyi mkpuchi maka onye ọ bụla.
Taa, ọnụ ụzọ na Excel Exhibition Center na London meghere na 10:00 am na November 1 maka Ụwa nke njem nlegharị anya ga-agbakọta ọnụ, na-ekwekwa aka ọzọ, makụọ ibe ya.
Masks nọ n'okpuru nnukwu ọchịchọ, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-abịa ebe a, gụnyere ndị ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, anwaghị iyi mkpuchi.
Nọvemba 1 bụkwa ụbọchị gọọmentị Bekee zuru ike chọrọ, n'ụzọ dị ịtụnanya n'ụbọchị ebe akụkọ ndị ọzọ na-ekwu na akwa nlekọta ahụike adịkwaghị ọzọ yana ọnụọgụ COVID-19 na-arị elu.
Okwu ikpe, ikpe na-arụsi ọrụ ike, ụlọ ọgwụ na ọnụ ọgụgụ ọnwụ na-arị elu na UK, mana ebe mmemme dị ka Excel, ụlọ mmanya, na klọb abalị na-emeghe ma ndị mmadụ na-enwere onwe ha.
Ọ bụ mmetụta nnwere onwe a mere n'ahịa njem njem ụwa na London taa. Njem njem na njem nlegharị anya bụ nnukwu ezinụlọ, ị hụrụ anya mmiri, na mmetụ mmadụ laghachiri mgbe ndị enyi ochie zutere ibe ha ọzọ mgbe afọ abụọ nke mgbochi COVID gasịrị.
WTM enyochala ndekọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa maka onye ọ bụla na-abanye na ebe ngosi ihe ngosi, mana nke a ezuola? Ọtụtụ ụlọ ọgwụ ọhụrụ dị ka ọ bụ site n'aka ndị nwere ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Ahịa Njem Ụwa dị jụụ karị, enwere ọtụtụ oghere na ebe a na-anọdụ ala, na n'agbanyeghị na ọ na-ejupụta mgbe a na-akwụ ụgwọ kọfị, ọ pụtara na ndị sonyere nwere ike gbasaa n'ụlọ ngosi ihe ngosi.
Ndị ọrụ - enweghị nkpuchi
Hon. Edmund Bartlett na-akwado maka ajụjụ ọnụ ya na CNN Richard Quest
Kọfị kọfị Costa adịghị arụ ọrụ
Nzukọ Ndị nta akụkọ Thailand
Nhazi eguzobe pere mpe, mana oghere n'elu oche agbanwebeghị nke ukwuu. Enwere ndị ngosi na ndị ọbịa ole na ole na-abịa. Saudi Arabia n'ezie gosipụtara ike n'igosipụta nguzo dị egwu na Pavillion. Saudi Arabia bụ onye mmekọ mmemme maka WTM.
Ọ bụrụ na WTN nwere ike igosipụta n'ime izu abụọ, ọ nweghị ikpe ọhụụ pụtara na enweghị nkpuchi, enweghị amụma ndọpụ uche ọha, ọ ga-apụta isiakwụkwọ ọhụrụ maka ihe omume ga-eme n'ọdịnihu na Britain na nzukọ na ụlọ ọrụ na-akpali akpali n'ebe ọzọ.
eTurboNews ga-egosiputa aIMEX America, ihe ngosi ahia ahia nke nzukọ na mkpali na Las Vegas November 8-11.
eTurboNews bụkwa ihe onye ọrụ mgbasa ozi gọọmentị maka World Travel Market London.